Bluetooth 5 ga-ekwuwapụta n'izu na-abịa | Gam akporosis
Njikọ Bluetooth na-aghọ dị mkpa maka smartphones taa ka ị nwee usoro ngwaọrụ abụọ dị ka ọrụ mgbaaka, smartwatches ma ọ bụ ngwaọrụ ndị ejikọtara iji gbasaa nhọrọ nke ihe a na-akpọ Intanet nke ihe. N'ime ụlọ ọhụrụ ejikọtara ọnụ, ọ ga-arụ ọrụ dị mkpa, yabụ ịkwalite teknụzụ dị mkpa iji nweta ahụmịhe ka mma.
Bluetooth Special Interest Group (Bluetooth SIG) ekwuputala na ụdị ọzọ nke Bluetooth ga-adị kpọọ dị ka Bluetooth 5. Mark Powel, onye isi oche nke SIG, ekpughela na a ga-ekwupụta ọkwa ọhụụ na June 16. Ozi na-akpali mmasị ịmara na teknụzụ a na-aga n'ihu na-aga n'ihu na anyị ga-ahụ ya n'oge na-adịghị anya na ngwaọrụ ndị ọhụrụ.
Powell nyekwara ozi ndị ọzọ gbasara nkọwa metụtara na nsụgharị n'ọdịnihu na nke ahụ bụ ya ha ga-echefu isi, nke putara na agaghi adi 5.0, 5.1 na na. Bluetooth 5 ga - enye ohere okpukpu abụọ na ugboro anọ ọsọ maka nnyefe ike dị ala. Dị ka ego, Bluetooth 5 ga-enyekwa ọhụụ ọhụụ dị mkpa maka ọrụ dịka ọrụ na ọrụ metụtara igodo.
Site na ịtinyekwu ikike ịdọ aka na ntị nke mgbasa ozi, Bluetooth 5 ga - eme ka ikwenye na nkenye nke mgbama yana ọrụ dabere na ọnọdụ nye ndị ọrụ n'ụwa niile. A ga-ekpughere nkọwa ndị ọzọ gbasara arụmọrụ Bluetooth na mmemme a ga-eme n'izu na-abịa.
Njikọ Bluetooth na ụdị nke ise nke ahụ ga-akwado iji ngwaọrụ ejikọrọ na-enweghị igbochi ọtụtụ ihe na batrị, ihe na-echegbu onwe ya na nsụgharị ndị mbụ ebe iji njikọ a metụtara oriri batrị. A eziokwu na bụ agaghịkwa ikpe ebe ọ bụ na ndị ọhụrụ na nsụgharị.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Gam akporosis » Noticias » Bluetooth 5 nwere oke dị elu na ọsọ ga-ekwuwapụta na June 16